ita shuwa kuti zvakaitika kune ino iphone 11 pro max mutengi hazvina kuitika kwauri
Kuru Nhau & Ongororo Ita shuwa kuti zvakaitika kune iyi iPhone 11 Pro Max mutengi hazvina kuitika kwauri
Ita shuwa kuti zvakaitika kune iyi iPhone 11 Pro Max mutengi hazvina kuitika kwauri
Pese paunotenga iyo iPhone nyowani, iwe ungangozvitora sezvisina basa kuti Apple yakarongedza bhokisi netambo dzakakodzera. Asi gore rino zvinhu zvakawedzera kuomarara nekuti izvo zvekuchaja zvinouya neiyo iPhone 11 zvakasiyana pane izvo zvinouya nemaPro modhi. Iwo ekupedzisira madhivha anouya akazara neMheni kune USB-C tambo uye 18W inokurumidza charger. Ivo vanotenga iyo iPhone 11 vanonamira neyakajairwa USB-A kune Mheni tambo iyo plugs mune inosanganisirwa 5W charger.
Chii chinounza izvi kumusoro murume munyoro anonzi Michal uyo akatenga nyowaniiPhone 11 Pro Max. Maererano naSvetapple.sk , Michal akashamisika kuona kuti pachinzvimbo chekutora USB-C kune Mheni tambo nekutenga kwake, bhokisi raakatora kumba raive neUSB-A kune Mheni tambo. Uye izvo zvakamusiya aine dambudziko remhando dzakasiyana; kana chitoro chaakatenga nhare kubva kune asingabvumire kuchinjanisa tambo, Michal anofanirwa kushandisa yekare 5W iPhone charger kana aine imwe, kana kutenga USB-C nyowani kuCheni yemheni. Apple inobhadharisa $ 19 uye kumusoro kweiyi tambo zvinoenderana nehurefu, asi mushure mekushandisa ingangoita $ 1, 100 yefoni, ndiani anoda kushandisa kunyange peni kuita chimwe chinhu chinofanirwa kunge chiri chemahara? Ndinovimba, kune uyu mutengi & apos; nekuda, mutengesi achaita zvakanaka. Chitoro chave chatobatika pamusoro peiyi yekusanganisa-kumusoro.
Kana iwe uchangobva kutenga iyo nyowani iPhone 11 Pro kana iPhone 11 Pro Max, tarisa kuti uve nechokwadi chekuti une Type-C tambo usati wabvisa iyo mubhokisi
Hatizive & kuti apos; hatizive chaizvo kuti vangani vatengi ve iPhone 11 Pro kana iPhone 11 Pro Max vatiza padambudziko rakafanana rakaitwa naMichal. Kana zvikaitika kwauri, heano mamwe mazano aungade kuteerera: kana iwe ukaona kuti une tambo isiriyo mubhokisi usati waibhedhenura, mira zvauri kuita iwe & apos; kuitazve udzore iro bhokisi kuchitoro uko yakatengwa kubva. Zvikasadaro, iwe unogona kupomedzerwa nekuchinjisa tambo iwe senzira yekukora tambo yemahara. Iko kusanganisa-kungave kwakaitika pamutsetse wegungano mune chimwe chezvivakwa muChina chaishandiswa kugadzira mamodheru e2019 iPhone.
Bhokisi neApple iPhone 11 Pro Max yakavharwa netsaona neType-A kune Mheni tambo mukati
Unogona kuyeuka kuti yekutanga Apple iPhone yakashandisa 30-pini chinongedzo kune USB-A tambo. Yakakura uye isinganzwisisike, 30-pini yekubatanidza yakatsiviwa nekadiki uye tekinoroji yepamusoro Mheni yemheni munaGunyana 2012 padivi peiyo iPhone 5. Kwemakore mashoma apfuura, pakave nerunyerekupe rwekuti Apple yaizokanda chiteshi cheMheni pa iPhone ichifarira. yeType-C yekuchaja chiteshi iyo iwe yaunoona pane Android nhare. Gore rakapera, Apple yakachinjira kune Type-C yekuchaja chiteshi cheiyo 11-inch uye 12.9-inch iPad Pro (2018) mamodheru. Uye nekuzungunuka kukuru mukugadzirwa kunotarisirwa kune maPhones e2020, mikana iri mukutsigira Apple kuita switch gore rinotevera kune Type-C yegore rinouya & apos; s iOS-dzinofambiswa nemaoko. Izvi zvinobvumidza vashandisi ve iPhone kuwana mukana kune zvakawanda zvishongedzo vasina kumbotakura imwe yekuwedzera tambo.
Kunze kwechiteshi chitsva chekuchaja, iyo 2020 iPhone mamodheru anotarisirwa kuve neshanduko dzinoverengeka kusanganisira rutsigiro rwe5G, chizvarwa chinotevera cheiyo isina waya yekubatanidza. Zvakare, isu taigona kuona AMOLED mapaneru pane ese matatu mamodheru, kusanganisira iyo 6.7-inch kuratidza runyerekupe rweiyo iPhone 12 Pro Max. Chiyero chinokurumidza kuzorodza (90Hz kana 120Hz) chinogona kunge chiri mumakadhi, zvichiita kuti mutambo wemitambo uratidzike nekukurumidza uye kupururudza unzwe buttery kutsetseka. Apple & apos; yavo yeA14 SoC, yakavakirwa uchishandisa TSMC & apos; s 5nm maitiro, ichagadzirisa masimba matsva. Uye isu taigona kuona quad-kamera setup pane 2020 Pro mamodheru ayo anozochengetedza iyo Wide, Ultra-Wide uye Telephoto kamera kubva gore rino & apos; s mafoni uye kuwedzera iyo Nguva yeNdiza (ToF) sensor. Iyo yekupedzisira inopa yakadzama yakadzama yekunzwa dhata uye ichabatsira kununura yakagadziriswa AR mhedzisiro uye zvimwe zvakasikwa bokeh blurs pane portraits.
Izvi ndizvo zvinogona kunge zvakaita kamera yekumashure ye iPhone 12 Pro & apos;
iphone 7 pamwe negadziriro yegadziriro
iphone 6s maawa ehupenyu hwebhatiri
Yakanakisa isina waya maBluetooth earbuds uye mune-nzeve mahedhifoni
Akanakisa asina waya majaira e iPhone uye Samsung Galaxy mafoni
Samsung Galaxy Tab 3 Lite (SM-T110) yakasimbiswa, Mushandisi Chinyorwa chakaziviswa
Nyowani AirPods 2019 vs yepakutanga AirPods: ese mutsauko
Akanakisa kamera maapplication eutema uye machena mafoto (Android uye iOS)
Virgin Mobile Canada neBell Canada ichavhura yako Apple iPhone kana iwe wavhura chikwama chako
Deal: T-Mobile inopa iyo 256GB iPhone 7 (Jet Nhema) ye $ 600 chete kumberi
Android 11 yekuvandudza neOne UI 3.0 beta yakaburitswa yeGPS S10 uye S10 +
Samsung Galaxy Note 7 mutengo uye zuva rekuburitsa paVerizon, AT & T, T-Mobile, Sprint, US Cellular